Ronaldo Oo Diiday In Uu La Dabaal-dego Bale iyo Carruurnimo Lagu Eedeeyey
HomeWararka MaantaRonaldo Oo Diiday In Uu La Dabaal-dego Bale iyo Carruurnimo Lagu Eedeeyey
Isaga waxay u ahayd wakhti aanu faraxsanayn, markii uu Gareth Bale dhaliyey gool uu ka toogtay meel dhinac ah oo uu kaga soo kabtay abaar ka haleeshay dhalinta goolasha illaa bishii January 24-keedii. Gool kale oo isla qaybta hore uu nasiibku siiyey Bale ayaa Madrid ka caawiyey in ay niyad wanaagsan ku tagto ciyaarta Barcelona ee Camp Nou, laakiin guushan waxa garab socotay arrimo dadku la yaabeen oo uuu sameeyey Cristiano Ronaldo, kaas oo la arkayay isaga oo saaxiibbadii ay goolal dhalinayaan balse aan dareemaynin farxad, waliba gacmaha wadhfinaya si cadho ka muuqato si uu u muujiyo in aanu farxad dareemaynin.
Ronaldo ayaa u malynayay in uu dhaliyey goolka koowaad ee furitaanka ciyaarta markii uu kubbad uu islaba-rogay goolwadaha dhaafiyey hase yeeshee uu ka soo dhex qabtay goolka ciyaartoy ka tirsanaa Levante, waxa se nasiibku siiyey kubbadaas oo dhamaystiray laacibka reer Welsh ee Bale kaas oo markii uu damaashaadayay labada dhegood qabsaday si uu ugu jawaabo taageereyaasha oo toddobaadyadii u dambeeyey ku qaylinayey. Farxaddaas Bale waxa garab socotay Ronaldo oo niyad jabsan kaas oo isku dayo dhawr ah oo uu sameeyeyna uu difaacyahanka Ivan Ramis ka badbaadiyey.
Gool-ka labaad, waxa iska lahaa oo kubadda goolka ku toogtay Ronaldo hase yeeshee waxay lugta kaga sii dhacday Bale, waxaana loo aqoonsaday goolkaas in uu dhaliyey Gareth Bale, waxaanay taasi niyad jab ku ridday Ronaldo oo halkii uu ka muujin lahaa farxadda ah in ay kooxdiisu goolal dhalisay la moodayey in uu ku farxi lahaa oo kaliya in uu isagu goolal dhaliyo.
Bale waxa ka degay culays saarnaa 9 ciyaarood oo aanu wax goolal ah dhalinin, waxaanay labadan goo lee uu xalay dhaliyey soo celinayaan niyaddiisa iyadoo ay ku soo fool leedahay ciyaar adag oo ay Barcelona ku booqanayaan toddobaadka dambe gurigooda. Laakiin waxa sidoo kale, kooxda caqabad ku noqon kara hab-dhaqanka carruurnimada ah ee Ronaldo ee haddii aanu gool dhalinin aanu xattaa farxadda kooxda guusheeda muujinaynin. Tababaraha Real Madrid, Carlo Ancelotti oo warbaahinta la hadlay markii ay ciyaartu dhamaatay ayaa sheegay in uu Ronaldo labada gool ee ay kooxdu dhalisayba qayb weyn ka qaatay, isla markaana uu qaab ciyaareedkiisu wanaagsanaa kulankaas xalay.
Ronaldo oo saddex jeer ku guuleystay xiddiga adduunka ugu fiican, waxa isku buuqan ku riday Lionel Messi oo Sabtidii dhaliyey laba gool isla markaana kor u dhaafay gool dhalintii oo hadda leh 32 gool halka uu Ronaldo dhaliyey 30.
Dhinaca kale, Bale oo lagu dhalleeceeyey in aanu qayb ka qaadanin in uu difaaca caawiyo markay kooxda kubaddu ka fiifto, khaasatan kulamadii Athletic Bilbao iyo Schalke ayaa si adag u shaqeeyey xalay, waxa uu gelayay difaaca marka ay lagama maarmaanka noqoto iyadoo ay waliba si fiican u wada shaqaynayeen Luka Modric oo ay u wada ciya ari jireen Tottenham.
“Modric ioyo Sergio Ramos qayb muhiim ah ayay ka ciyaareen, joogitaanka Modric waxa uu caawiyaa Bale sababtoo waxay ka wada ciyaareen Tottenham, si fiicanna way isku fahmayaan” sidaas waxa yidhi Carlo Ancelotti oo sifeeyey sidii ay u wada ciyaareen labadan laacib.
Ronaldo ayaa isaguna u ciyaaray si fiican hase yeeshee waxa uu isticmaalay qaaciido ah aniga, waxa ka maqnayd qaaciidada kooxda oo guuleysta. Dareen celistiisa labadii gool ee Bale ayaa muujisay in uu kalidii wax doonayo.
Hab-dhaqanka noocan ah, ayaa ah mid la mid ah dhaqamada carruurnimada ee jeclaysiga wax kasta oo ay arkaan, kuwaas oo wax kasta oo ay arkaan iyagu isla doona isla markaana haddii la weydiiyo shay meel fog yaalla cidda leh ku jawaaba in ay iyagu leeyihiin.
Watch Liverpool 2-1 Everton – All Goals & Highlights
War Degdeg ah: Madaxweyne Siilaanyo Oo Ku Dhawaaqay Inuu Muuse Biixi U Tanaasulay
10/11/2015 Abdiwahab Ahmed
Aguero oo shan gool 20 daqiiqo kaga dhaliyey Newcastle – RikoodhHore U Yaalayna Ku Biiray